Emails-ku waxay muujinayaan Xiriirka Chummy ee u dhexeeya ICE, Colorado DMV - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > In News > Emails-ka ayaa muujinaya Xiriirka Chummy ee u dhexeeya ICE, Colorado DMV
Emails-ka ayaa muujinaya Xiriirka Chummy ee u dhexeeya ICE, Colorado DMV
COLORADO, USA - Bishii Juun 2019, Jade Kominek, oo ah falanqeeye baaritaan oo ka tirsan Qeybta Gawaarida ee Colorado, ayaa emayl ugu diray shaqaale ka tirsan Hay'adda Socdaalka iyo Canshuuraha si uu wax uga weydiiyo xaaladda socdaalka ee qof ay ku dhacday baaritaanka DMV.
Jeff Hamilton, oo ah sarkaal maxalli ah oo masaafurinaya ICE, ayaa ku jawaabay isagoo u diray Kominek faylka ay hay'addu ku haysay shaqsiga. "Waxay u badan tahay inay noo xirnaan doonto marka lagu daro dambi kasta oo dowladeed oo aad ku soo oogi karto dadkaaga," ayuu Hamilton qoray, ka dibna la saxiixday "ugaarsi wanaagsan!"
E-mayllada, oo ay heleen Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado iyada oo loo marayo codsi diiwaangelin furan, ayaa muujinaya in DMV iyo ICE ay lahaayeen xiriir xasaasi ah oo ka bilaabmay ugu yaraan 2018 iyo illaa 2020, inkasta oo xaqiiqda ah in Gobolka Colorado ay dhiirrigelinayeen dadka deggan inaad codsato laysanka darawalnimada iyadoon loo eegin heerka socdaalka.
Hadda, qaar ka mid ah sharci-dajiyayaasha gobolku waxay rabaan inay dhisaan gidaar-wadaag xog-wadaag ah oo u dhexeeya hay'adaha gobolka iyo hay'adaha socdaalka ee federaalka si soogalootiga aan sharciga lahayn ay u dareemaan ammaan inay helaan liisamada darawalnimada iyo helitaanka adeegyada kale ee gobolka.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri Westword.com